अन्तर्राष्ट्रिय – Page4– SidhaRekha
२०७४ कार्तिक १५, बुधबार १०:०३२०७४ कार्तिक १५, बुधबार १०:०३२०७४ कार्तिक १५, बुधबार १०:०३ by Ghanshyam Sagar
न्यूयोर्कमा ट्रकले किचेर आठ जनाको मृत्यु
न्यूयोर्कको लोअर म्यानहटमा एक ट्रक ड्राइभरले ट्रक फुटपाथ र साइकल लेनमा चढाउँदा आठ जनाको मृत्यु भएको छ । घटनामा कम्तिमा १२ जना घाइते भएका छन्। प्रहरीले घटनालाई चरमपन्थी हमलाको रुपमा लिएको छ। २९ वर्षीय ट्रक चलाक सेफुलो साइपोवलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। न्युयोर्कका केयर बिल ब्लाजियोले घटनालाई कायरतापूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले न्युयोर्क हमला विरामी र खतरनाक व्यक्तिले गराएको टिप्पणी गरेका छन्। -बिबिसी
२०७४ कार्तिक ८, बुधबार १४:५२२०७४ कार्तिक ८, बुधबार १४:५२२०७४ कार्तिक ८, बुधबार १४:५२ by Ghanshyam Sagar
चिनियाँ राष्ट्रपति सी पार्टी प्रमुखमा पुनः निर्वाचित
बेइजिङ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव (प्रमुख) एवम् चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अर्को पाँचबर्षे कार्यकालका लागि पनि निर्वाचित भएका छन्। राजधानी बेइजिङ्मा जारी चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १९ औँ महाधिवेशनले उनलाई सो पदमा पुन अर्को पाँच बर्षका लागि निर्वाचित गरेको हो। सो महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिहरुले बुधबार मतदान गरी सीलाई अर्को पाँच बर्षे कार्यकालका लागि पनि पार्टीको महासचिव चयन गरेको हो। चिनियाँ समाचार समिति, सिन्ह्वाले दिएको जानकारीअनुसार चीनको सबैभन्दा शक्तिशाली उक्त पदमा उनलाई बुधबार बिहान बन्द कोठाभित्र भएको मतदानले निर्वाचित गरेको थियो। सो महाधिवेशनले नै हिजो आगामी कार्यकालका लागि कम्युनिष्ट पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य र केन्द्रीय सदस्यहरु पनि नियुक्त गरेको थियो। गएको करिब हप्तादिनदेखि बेइजिङ्मा जारी पार्टीको महाधिवेशनमा एकपछि अर्क
२०७४ आश्विन १६, सोमबार १६:००२०७४ आश्विन १६, सोमबार १६:००२०७४ आश्विन १६, सोमबार १६:०० by Ghanshyam Sagar
काठमाडौँ । अमेरिकाले सन् २०१९ को डाइभर्सिटी भिसा (डि.भी.) कार्यक्रमको लागि आवेदन दर्ता भोलिदेखि खुल्ने भएको छ । अक्टोबर ३ तारिखदेखि नोभेम्बर ७ सम्म डिभी भर्न सकिने भएको छ । अक्टोबर ३ अर्थात् मंगलबार मध्याह्नदेखि डिभी भर्न सकिने भएको हो । अमेरिकी सरकारले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार यसपाली अमेरिकामै बस्ने नेपालीले पनि नेपालमा बस्ने नेपालीले जसरी नै डिभि आवेदन फर्म भर्न सक्नेछन् । यसपटक भरिने डिभीको नतिजा आगामी २०१८ को मे १ तारिखबाट आउन सुरु गर्नेछ । हालसम्म करिब ५० हजार नेपालीलाई डिभी परिसकेको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले यसपाली डिभि आवेदन भर्ने नियममा कुनै परिवर्तन नभएको तर अन्तिम समयतिर बढी चाप हुने भएकाले समयमै अनलाइन फर्म भर्न सूचित गरेको छ । डिभी कसरी भर्ने? फर्म भर्ने अवधिमा www.dvlottery.state.gov मा गई ई-डिभीको आवेदन फारम भर्नु पर्नेछ । डिभीको लागि आवेदन दिँदा कुनै पनि श
२०७४ आश्विन १६, सोमबार १५:४०२०७४ आश्विन १६, सोमबार १५:४०२०७४ आश्विन १६, सोमबार १५:४० by Ghanshyam Sagar
अमेरिकाको लसभेगासमा गोली चल्दा २० को मृत्यु
काठमाडौँ । अमेरिकाको लस भेगस शहरस्थित एउटा क्यासिनोमा अन्धाधुन्धा गोली हानाहान हुँदा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २० पुगेको र १ सयजनाभन्दा बढी घाइते भएकाे बीबीसीले जनाएको छ । प्रहरीले बन्दुकधारी एक जना स्थानीयवासी रहेको बताएपनि उसको नाम खुलाइएको छैन । उक्त आक्रमणकारीलाई प्रहरीले गोली हानेर मारिदिएका छन्। बन्दुकधारीसँगै रहेकी भनिएकी उसकी केटी साथीको प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ। अमेरिकी सुरक्षा अधिकारीले क्यासिनोमा गोली चलाउने आक्रमणकारीको जवाफी कारवाहीमा मृत्यु भएको बताएका छन् । घटनापछि लस भेगासको विमानस्थलबाट कयौं हवाई उडानको रुट परिवर्तन गरिएको छ । अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार अाइतबार करीब १० बजे राती एउटा सांगीतिक कार्यक्रम भइरहँदा फायरिङ भएको थियो । बन्दुकधारीले म्यान्डले बे होटल तथा कसिनोको ३२औं तलाबाट गोली चलाएको बताइएको छ।
२०७४ आश्विन ६, शुक्रबार १४:०२२०७४ आश्विन ६, शुक्रबार १४:०२२०७४ आश्विन ६, शुक्रबार १४:०२ by Ghanshyam Sagar
उत्तर कोरियाले भन्यो : ट्रम्पको सम्बोधन ‘कुकुर भुकाइ’
उत्तर कोरियालार्इ ध्वस्त पार्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको अभिव्यक्तिलाई उत्तर कोरियाका उच्च अधिकारीहरुले "कुकुरको आवाज"को संज्ञा दिएका छन् । बुधबार राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै डोनल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरियाले अमेरिका र उसका मित्र शक्तिलाई खतरा पुर्‍याइरहेकाले उत्तर कोरियालाई पूर्ण रुपमा ध्वस्त पार्ने चेतावनी दिएका थिए। मंगलबार ट्रम्पले सोल– संयुक्त राष्ट्रसंघको ३२ औं महासभामा गरेको सम्बोधनमाथि प्रतिक्रिया दिँदै उत्तर कोरियाका उच्च कूटनीतिज्ञले उक्त जवाफ दिएका हुन् । ट्रम्पको उक्त सम्बोधनप्रति उत्तर कोरियाका विदेश मन्त्री री योङ–होले पहिलो औपचारिक प्रतिक्रिया दिए । राष्ट्रसंघले पटक पटकको प्रतिबन्धलाई वेवास्ता गर्दै उत्तर कोरियाले आफ्नो परमाणु कार्यक्रम निरन्तर अघि बढाइरहेको छ । उत्तर कोरियाली विदेशमन्त्री रीले अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ मुख्यालय नजिकै
२०७४ भाद्र १०, शनिबार ०८:४१२०७४ भाद्र १०, शनिबार ०८:४१२०७४ भाद्र १०, शनिबार ०८:४१ by Ghanshyam Sagar
उत्तर कोरियाले प्रहार गर्‍यो छोटो दूरीका तीन क्षेप्यास्त्र
काठमाडौँ, भदौ १० । शनिबार बिहानै उत्तर कोरियाले छोटो दूरीका तीन वटा मिसाइल परीक्षण गरेको छ । चिनियाँ टेलिभिजन 'सीजीटीएन'ले दिएका खबरअनुसार स्थानीय समय अनुसार शनिबार बिहान ६:४९ मा आधा घण्टाभित्र उत्तर कोरियाले छोटो दूरीका तीन क्षेयास्त्र परीक्षण गरेको हो । उत्तर कोरियाको ग्याङवान प्रान्तबाट प्रहार गरिएको क्षेप्यास्त्र करिब २५० किलोमिटर दूरी पार गरी विस्फोट भएको थियो दक्षिण कोरियाली अधिकारीले बताएका छन् । अमेरिकी प्यासिफिक कमाण्डका कमाण्डर 'डेभ बेन्हाम'ले परीक्षण गरिएका मध्ये पहिलो र तेस्रो क्षेप्यास्त्र विफल भएको र दोस्रो क्षेप्यास्त्र मात्रै विस्फोट भएको दावी गरेका छन् । अमेरिकी र दक्षिण कोरियाली सेनाले केही दिनदेखि गरिरहेको संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई उत्तर कोरियाले आफूलाई उक्साउन गरिएको गतिविधिको संज्ञा दिई विरोध जनाइरहेको छ । अमेरिकाको सैन्य अधार क्षेत्र 'गुआम'मा आक्रमण गर्ने चेतावन
२०७४ भाद्र ४, आईतवार ११:०२२०७४ भाद्र ४, आईतवार ११:०२२०७४ भाद्र ४, आईतवार ११:०२ by Ghanshyam Sagar
लद्दाखमा भारत–चीनबीच झडप भएको पुष्टि (भिडियोसहित)
काठमाडौं, ४ भदौ । केही दिनदेखि भारत र चीनबीचको सीमा विवाद तनावपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । डोक्लामको सीमा विवादले सार्थक निकास नपाउँदै लद्दाखमा दुई देशका सेनाबीच झडप नै भएको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । भारतद्वारा प्रशासित कास्मिर क्षेत्रमा पर्ने लद्दाखमा दुवै देशले झडप भएको वा नभएको भन्नेबारे आ–आफ्नै दाबी गरिरहेका बेला त्यसको भिडियो सार्वजनिक भएको हो । भिडियोमा कसैले मोबाइलमार्फत् टाढैबाट भारत र चीनका सेनाबीच ढुंगा, लात्ती र मुक्का हानाहान भइरहेको दृश्य कैद गरेको छ । भिडियो भारतीय सेनाका एक जना अवकासप्राप्त रथी प्रकाश कटोचले शनिबार आफ्नो फेसबुकमार्फत् सार्वजनिक गरेको एजेन्सीहरुले जनाएका छन् । ४४ सेकेन्ड लामो उक्त भिडियोमा दुवै देशका सेनाबीच घम्साघम्सी भएको र केही सेना घाइते भएको दाबी एजेन्सीहरुको छ । यही अगष्ट १५ मा लद्दाखको प्याङयोङ भन्ने ठाउँमा भिडन्त भएको भारतीय मिडियाले समाचार प्
२०७४ श्रावण ३१, मंगलवार १८:१९२०७४ श्रावण ३१, मंगलवार १८:१९२०७४ श्रावण ३१, मंगलवार १८:१९ by Ghanshyam Sagar
भारतको ७० औं स्वतन्त्रता दिवस : मोदी भन्छन्- ‘सुरक्षा प्रमुख प्राथमिकता’
नयाँदिल्ली, ३१ साउन । भारतमा विशेष कार्यक्रमका साथ मङ्गलबार ७१ औँ स्वतन्त्रता दिवस मनाइएको छ। स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लाल किल्लामा सम्बोधन गरेका छन्। स्वतन्त्रता दिवस मनाउन लाल किल्लामा हजारौँ भारतीय नागरिक जम्मा भएका थिए। उनीहरुलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले भारतको प्रमुख प्राथमिकता सुरक्षा भएको बताए। उनले नागरिकको सुरक्षाका लागि वर्तमान सरकार सबैभन्दा बढी चिन्तित रहेको बताए। उनले २०२२ सम्म भारतलाई 'न्यू इन्डिया' बनाउन संकल्प लिनुपर्ने बताए । मोदीले भारतको विपक्षमा लाग्ने र भारतीय भूमिमा असुरक्षा मच्चाउन प्रयास गर्ने जो सुकै विदेशी होस वा स्वदेशीलाई पनि भारतले नछोड्ने चेतावनी दिए। त्यस्तो शक्तिका विरुद्धमा लडन् भारत पूरै सक्षम रहेको उनले बताए। भारतका मिडियाहरुले चीन र भारतका बीचमा पछिल्लो समयमा सीमा क्षेत्रमा तनाव बढिरहेको भनिएका
२०७४ श्रावण १०, मंगलवार १७:२७२०७४ श्रावण १०, मंगलवार १७:२७२०७४ श्रावण १०, मंगलवार १७:२७ by Ghanshyam Sagar
भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले लिए सपथ
काठमाडौँ, १० साउन । भारतका नवनियुक्त १४ औँ राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले सपथ लिएका छन्। संसदको सेन्ट्रल हलमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपतिले सपथ लिएका हुन्। उनले सपथमा आफू सधैं भारतीय जनताको पक्षमा काम गर्ने बताएका छन्। सपथमा उनले देशको सेवामा लाग्‍ने, लामो यात्रा र गाउँमा गरीबीले पढ्‍नेले अवसर पाउँने, भारतको उपलब्धीले सधै सफलताकमो दिशा तय गर्ने, देशका नागरिकले आफ्नो काम आफैले रोज्‍न पाउने, प्रत्‍येक नागरिक संस्कृति, विविधता तथा सर्वधर्म समभाव राख्‍नु नै गर्व गर्न लायक हुने लगायतका १० वटा महत्त्वपूर्ण कुरा व्यक्त गरेका छन् ।
२०७४ श्रावण ५, बिहीबार १७:४८२०७४ श्रावण ५, बिहीबार १७:४८२०७४ श्रावण ५, बिहीबार १७:४८ by Ghanshyam Sagar
भारतका नयाँ राष्ट्रपतिमा रामनाथ कोविंद निर्वाचित
बिहीबार सार्वजनिक भएको निर्वाचन परिणाम अनुसार सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टिका उम्मेदवार रामनाथ कोविंद भारतका नयाँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन्। भाजपा तथा उसका गठबन्धन सहयोगी एनडीएका दलहरुको समर्थन प्राप्त कोविंदले विपक्षी कंग्रेस र उसका सहयोगी दलहरुको समर्थन प्राप्त उम्मेदवार मिरा कुमारलाई ठूलो मतान्तरले हराएका छन् । कोविंद र कुमार दुवै दलित समुदायका हुन् । कोविंद दलित समुदायबाट भारतको राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुने दोस्रा व्यक्ति हुन् । को हुन् कोविंद? रामनाथ कोविंद बिहारका राज्यपाल थिए। शुरुमा राष्ट्रपति उम्मेद्वारको दौडमा उनको नाम उतिसारो चर्चामा थिएन्। भारतीय जनता पार्टीको उत्तर प्रदेशका दलित नेता उनी दुई पटक राज्यसभाका सदस्य भएका थिए। उनीसँग दिल्ली हाइकोर्ट-सुप्रीम कोर्टमा १६ वर्ष कानून व्यवसायीको रुपमा अभ्यास गरेको अनुभव छ। उत्तर प्रदेशबाट सन् १९९४ मा राज्यसभामा प्रवेश गरेका